Mkpuchi ọkwa mica ntụ ntụ Ndị na-eweta ya na ụlọ ọrụ ya - China Na-ekpuchi ọkwa mica ntụ ntụ Nsukka
Huajing mgbochi mmiri mkpuchi ọkwa mica ntụ ntụ ji mica flake si Lingshou Lubaishan ralnweta, Hebei Province.It na-emepụta site ọdịnala ndinuak ikuku nkewa na mmiri egweri usoro karị The eke Muscovite mica eme ọtọ ọrụ dị iche iche iche iche nke mkpuchi ebe ọ bụ na ruru ya echekwa uru .
Huajing mkpuchi ọkwa sịntetik mica jiri aka mee njikọ flake, untrawhite na bright.It bụ ebe a na ọdabara na elu-ọgwụgwụ mkpuchi, e wezụga atụmatụ nke eke mica ntụ ntụ, okpomọkụ na-eguzogide nwere ike ịbawanye na 1200 ℃, ịdị ọcha nwere ike ịbụ 99.9% , olu resistivity dị nnọọ elu karịa mica nkịtị.
Huajing mkpuchi ọkwa phlogopite sitere na Mongolia dị n'ime na Xinjiang. Ngwaahịa kachasị adabara maka mkpuchi mkpuchi corrosive, nke nwere ike nweta nsonaazụ dị mma na pipeline mmanụ, agba mmiri, ụgbọ ala ụgbọ ala ụgbọ ala, na ihe eji eme ụlọ nke dị n'ụsọ oké osimiri. na mkpuchi mkpuchi pụrụ iche nke oke okpomọkụ & nrụgide ebe ọ bụ na ọ bụ na njirimara dị iche iche mara mma.
Huajing mkpuchi ọkwa Muscovite ntụ ntụ jiri mica flake si Lingshou Lubaishan Mineral, Province Hebei. Musco Musite nke mica na-arụ ọrụ dị iche iche n'ụdị mkpuchi dị iche iche kemgbe uru akụ na ụba ya.
Akọrọ mica ntụ ntụ adabara n'okporo ụzọ marking, ụlọ mputa mgbidi agba, plasta, mgbochi corrosion mkpuchi, wdg Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè na-egwu uru nke mica abụọ-akụkụ ihe owuwu, melite n'ibu Njirimara nke mkpuchi film, na mgbochi-cracking .Ọ dị mma ọrụ mkpuchi UV nwere ike melite ike ihu igwe nke mkpuchi.
Mica tumadi na-eti mkpu n'ime monoclinal crystal system, nke bụ pseudohexagonal thin flake, scaly, platy, na mgbe ụfọdụ pseudohexagonal column.Hardness 2 ~ 3, kpọmkwem nnukwu mpo 2.70 ~ 3.20, njupụta nke njupụta 0.3-0.5. nke ihe di n'ime ígwè, nke enwere ike ibuli site na ala di ala rue ala nkịtị, ma nwee ike itinye mkpanaka ọkụ.